Apple inotanga kubvisa zvakapetwa zvikumbiro kubva kuApp Store | IPhone nhau
La App Store iOS inozivikanwa nezvikonzero zvakawanda, chimwe chazvo ndiko kushambidzika kwakachena uko siginecha ya Cupertino inochengetedza runyorwa rwekushandisa uye nhau, iwe unoziva, mhando iri nani kupfuura huwandu ndeimwe yemazita ayo Apple inochengeta iyo iOS application chitoro.
Apple inotora mukana weawa mavhiki ekudzikama padanho re software kuchenesa App Store yezvinyorwa zvekushandisa. Muchidimbu, Apple yatora mutsvairo muchitoro chekushandisa nechinangwa chekubvisa sora shoma kuratidza maruva akanaka kwazvo.
Ruzivo urwu rwakagovaniswa na TechCrunch en chirevo pamusoro peichi chakaipa chinoshamisika chakaonekwa muApp Store, chimwe chinhu chisina kujairika kusvika ikozvino, izvo zvinoshandiswa zvakapetwa.
Vagadziri vakatenderwa ku "spam" maapplication avo nekuadzokorora paIOS App Store kwemakore. Nekudaro, uyu mutemo wakashanduka mune yekuvandudza portal Icho chaive chakapararira muenzaniso pakati peVoIP kunyorera, sezvo izvi zvaitendera vashandisi kuwedzera akasiyana manhamba efoni uye kwete kurasikirwa mashandiro.
Aya ndiwo maratidziro evanogadzira mavhezheni akasiyana echishandiso chimwe chete, ivo vanongo chinja zita uye chikamu. Nekudaro ivo vanofukidza yakakura yakakura mhando yekutsvaga uye kushanda.
Zvisinei, Iyi tsika yave ichizivikanwa neApple kubvira 2016, asi iko zvino, muna Kukadzi 2019, kana zvave zvakanyanya kukomba nezve kubvisa izvi zvinoshandiswa, chimwe chinhu chisiri kuzoita imwe yenyasha kune vanopfuura mumwe mugadziri uyo akawana imwe "yekuwedzera" nekutyora mitemo yaApple. Iyo yekuvanzika uye mhando yezvikumbiro zvagara zvichikosha kune iyo North America yakasimba, nzira yekuchengetedza muyero wekugutsikana uye ruzivo rwevashandisi izvo zvave zvichipa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inotanga kubvisa zvakapetwa maapplication kubva kuApp Store
'... chimwe chinhu chisiri kuzoita imwe yenyasha kune vanopfuura mumwe mugadziri uyo akawana "yekuwedzera" nekutyora mitemo yaApple.'
Kana kusvika parizvino Apple ichibvumidza, ndeyekuti iyo mirawo yanga isiri kutyorwa, ndinodaro.
Hafu yekutengesa kwese smartwatch muna 2018 yaive yeApple Watch